नेपाल आज | भाजपाका नेता भन्छन्, ‘केपी ओलीको शैली नेपाल–भारतको सम्बन्ध बिगार्नमा उद्यत’ (भिडियोसहित)
भाजपाका नेता भन्छन्, ‘केपी ओलीको शैली नेपाल–भारतको सम्बन्ध बिगार्नमा उद्यत’ (भिडियोसहित)
मङ्गलबार, ०८ चैत २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
चैत –८ । भारतीय जनता पार्टीका नेता गोपाल नारायण सिंहले कञ्चनपुरमा एसएसबीले गोली नचलाएको दाबी गरेका छन् । नेपालआजसँगको कुराकानीमा नेता सिंहले भने, ‘चीनको प्रभावमा रहेका नेपालका माओवादीहरुले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बिगार्न भारततिर गएर नेपालीलाई नै गोली हानेका हुन् ।’
हरिहरनाथ –मुक्तिनाथ सांस्कृति यात्रा २०१७ का क्रममा नेपाल आएका नेता सिंहल नेपाल भारतको युपि, बिहार भन्दा फरक नरहेको धारणा पनि राखेका छन् । भारतको राज्यसभाको सदस्यसमेत रहेका नेता सिंहले भने, ‘हाम्रो लागि जसरी बिहार र उत्तर प्रदेश हो नेपाल पनि त्यस्तै एक प्रदेश हो । यसकारण नेपालबाट हुने तस्करीलाई पनि वास्ता गर्दैनौं । सीमामा सुरक्षा कडा नपार्नुको कारण पनि हाम्रो यहि नजरिया हो ।’
नेता सिंहले चीनको उक्साहटमा नेकपा एमालेले नाकाबन्दीमा भारतको विरोध गरेको आरोप लगाएका छन् । नेपालमा कम्युनिष्टहरुको स्रोत सबै चीनबाट आउने भएकोले उनीहरु भारततर्फ भन्दा चीनतर्फ बढी लचक भएको उनको दाबी छ ।
उनले नेपालमा चीनको प्रभाव र केपी ओलीबारे टिप्पणी गर्दै भने, ‘दुनियाँबाट कम्युनिजम बिस्तारै बिस्तारै समाप्त भइसकेको छ । नेपालमा माओवादी वा कम्युनिष्टहरुको स्रोत भनेको चीन हो । चीनको रोटी खाएर उनीहरुले भारतसँग अडान लिनु ठीकै हो । स्वभाविक रुपमा भारतसँग टक्कर लिने र चीनसँग नजिकिने उनीहरुको बानी हुन्छ । जसको रोटी खाएका छन् उसको सोझो त गर्नै पर्यो नी ।’
नेपालले भारतलाई जति नै गाली गरे पनि नेपाललाई सहयोग गर्न कोही पनि नआउने नेता सिंहले उल्लेख गरे । उनले नाकाबन्दीको बेला पनि चीनले नेपाललाई कुनै सहयोग नगरेको बताए ।
नेता सिंहले राखेका धारणाको संक्षिप्त रुप यस्तो छः
–नेपाल र भारत दुई फरक फरक मुलुक हुन् । तर यी दुई बीचको सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण हामी एक जस्तै छौं । यहाँका नागरिकहरु एक आपसमा फरक ठान्न सक्छन् । भारतले नेपालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै फरक सोच राख्दैन । सबै तीर्थस्थलको दृष्टिले त हाम्रो लागि नेपाल मुुकुट हो ।
–नेपाल गणतन्त्रमा गयो । हिन्दु राष्ट्र त्यागेर धर्मनिरपेक्षतामा गयो । यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । यसमा हामी सम्बन्धित छैनौं । नेपाललाई पनि हिन्दुस्तानको आवश्यकता छ । नेपालाई यसका अरु छिमेकी कसैले पनि भलो गर्दैनन् । अहिले पनि ५०–६० लाख नेपालीहरु भारतमा काम गर्छन् । भारतमा नेपालीको आनीबानी सबैलाई थाहा छ । नेपालीमाथि भारतमा विश्वास गरिन्छ । भारतीय सेनामा पनि गोर्खा रेजिमेन्ट सबैभन्दा शक्तिशाली छ ।
–नेपालमा जुन सुकै व्यवस्था आए पनि शासनमा हिन्दू प्रधानता नै रहनेछ । यहाँको संस्कृति जस्तो छ त्यस्तै हुनेछ । कुनै पश्चिमा संस्कृति नेपालमा प्रवेश गर्न सक्दैन ।
–हामी भारतीयहरु नेपाल प्रवेश गर्दा केही औपचारिकताहरु पूरा गर्नु पर्छ । तर नेपालीहरु भारत जाँदा कुनै औपचारिकता पूरा गर्नु पर्दैन । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण त अर्को देशबाट नेपालमा सामान ल्याइन्छ र त्यो भारततिर तस्करी गरिन्छ । तब पनि भारतले नेपाललाई कडा व्यवहार गर्दैन ।
–हाम्रो लागि जसरी बिहार र उत्तर प्रदेश हो नेपाल पनि हाम्रो लागि त्यस्तै एक प्रदेश हो । यसकारण नेपालबाट हुने तस्करीलाई पनि वास्ता गर्दैनौं । सीमामा सुरक्षा कडा नपार्नुको कारण पनि हाम्रो यहि नजरिया हो ।
–नेपालमा क्रिष्चियन मिसिनरी चलाइएको छ । भारतमा पनि मिसिनरी थियो । उहाँ रोकतोक लागि सकेको छ । नेपालले पनि यसबारे सोच्नु पर्छ ।
–कञ्चनपुरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले गोली हानेको म पत्याउँदिन । हल्ला चलाइएको मात्रै हो । त्यो दिन कञ्चनपुरमा कुनै एसएसबी नै थिए । यसबारेमा अनुसन्धान गर्नु राम्रो हुन्छ । बिना कारण भारतले किन गोली हानेर नेपाली हत्या गर्छ र ? नेपालका माओवादीले भारततिर गएर नेपालीलाई गोली हानेर नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध विगारेको हुन सक्छ ।
–नेपालका जनता धेरै ‘भोलाभाला’ सीधा छन् । केही राजनीतिक दलहरुले दिग्भ्रमित गर्छन । नेपाली जनताले आफ्नो संस्कृति जोगाउन पनि सचेत हुनुपर्छ ।
–चीनमा नेपालीहरुलाई माओवादी भनेर माया गरिदैन । पाकिस्तनमा त छिर्नै दिइदैन । तर भारतमा नेपालीलाई भारतीय सरह व्यवहार गरिन्छ ।
–सिक्कीमलाई हामीले बिलय गरेको होइन । त्यहाँका जनताको सम्प्रभुता उनीहरुसँग छ । सिक्कीमको विकासका लागि एक गरेका हौं । बिलय गर्ने भए भुटानलाई हामी गरिसक्ने थियौं । नेपाल विकसीत होस भन्ने हाम्रो चाहना हो । नेपाल विकसित भयो भने भारतको बोझ कम हुन्छ । नेपाललाई पनि सिक्किमीकरण गर्ला कि भन्ने चिन्ता बेकार हो । हामी कसैलाई मिलाउँदैनौं ।
–केपी ओलीको अडानको जवाफमा उनले भने, ‘दुनियाँबाट कम्युनिजम बिस्तारै बिस्तारै समाप्त भइसकेको छ । नेपालमा माओवादी वा कम्युनिष्टहरुको स्रोत भनेको चीन हो । चीनको रोटी खाएर उनीहरुले भारतसँग अडान लिनु ठीकै हो । स्वभाविक रुपमा भारतसँग टक्कर लिने र चीनसँग नजिकिने उनीहरुको बानी हुन्छ । जसको रोटी खाएका छन् उसको सोझो त गर्नै पर्यो नी ।’
–भारतसँग सम्बन्ध बिगारेर नेपाललाई फाइदा छैन । नेपालमा दलहरुले उत्पात मच्चाए भने भारतले बोर्डर सिल गर्छ । नोक्सान नेपाललाई नै हुन्छ । भारतलाई गाली गरेर नेपालको भलो हुदैन ।
–एमालेको चाहना नै नेपालर भारतको सम्बन्ध बिगार्ने भएको छ ।
–भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको थिएन । नाकाबन्दी गरेको भए सीमामा किन त्यति लामो ढुवानी साधनको लाइन हुन्थ्यो ? नाकाबन्दी भएको भए हामी सीमा भन्दा वर नै बन्द गरिदिने थियौं । त्यो बेला चीनले पनि सहयोग गरेन ।
–नेपालको पहाडी र तराईका जनताबीच फाटो लगाउने काम विदेशीले गरेका हुन् । नेपालीहरु सोझा छन् । उनीहरु आपसी झगडा गर्दैनन् । नेपालमा माओवादीले बिगारेको हो । माओवाद कहाँबाट उत्पती भएको हो ?
gopal narayan singh nepal india politics